ပုရိသတို့ အသဲစွဲ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်လာစေဖို့ လျှို့ဝှက်ချက် ၅ ချက် !!! - JAPO Japanese News
ဟူး 22 Apr 2020, 13:06 ညနေ
သင့်ရဲ့ အနီးနားမှာရော ရှိလား? ဘာလို့မှန်း မသိပေမယ့် လူကြိုက်များနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို တွေ့ဖူးမှာပါ။
သူ့မရဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထား၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးက မိမိနဲ့ သိပ်မကွာဘူးလို့ ထင်မိပေမယ့် သူမကတော့ ရေပန်းစား လူကြိုက်များတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်။ သူမကိုယ်သူမ လူကြိုက်များတယ်ဆိုတာ သတိမထားမိရင်တောင် သူမဆီမှာတော့ လူကြိုက်များစေတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုတာရှိလို့ပါတဲ့။
ဂျပန်မှာ ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးပါလိမ့်?
ပုရိသတွေအကြား ရေပန်းစားလျက်ရှိတဲ့ လေယာဉ်မယ်တွေပြောပြတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။
ကျွန်မက လုပ်ငန်းခွင်မှာဖြစ်ဖြစ် အပြင်မှာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အမြဲတမ်း ရင်ထဲကပါတဲ့ အပြုံးနဲ့ ပြုံးနိုင်အောင် အမြဲနေပါတယ်။ အပြုံးကြောင့်နာကျင်စေတဲ့သူ၊ မနှစ်သက်တဲ့သူဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ကျွန်မပြုံးတဲ့အခါ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကို လည်းပျော်ရွှင်စေပါတယ်။
(၂၅ နှစ်၊ ပြည်တွင်းခရီးစဉ်)
ဘယ်လောက်လှတဲ့သူဖြစ်ဖြစ် အပြုံးမရှိရင်တော့ စွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ မခံစားရဘူး။ ပြဿနာအနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့အခါ အပြုံးနဲ့ တောင်းပန်ရင်တောင် ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်တဲ့။ ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာတွေတော့ မပါဘူးပေါ့။
၂။ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ မျက်နှာရိပ် မျက်နှာကဲသိသူ
အလုပ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အမြဲသတိထားပြီး ကြည့်ရှုလေ့လာပါတယ်။
တခြားသူတွေနဲ့ ထမင်းစားတဲ့အခါမှာလည်း ဟင်းကို ဝေမျှပေးတာတို့ အရက်ငှဲ့ပေးတာတို့ ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး လုပ်ပေးတဲ့အတွက် တစ်ဖက်သူအနေနဲ့ အလေးပေးတဲ့ ခံစားမှုမျိုးကို ရရှိစေပြီး ပိုပြီးလည်း ရင်နှီးလာစေပါတယ်တဲ့။
(၂၇ နှစ်၊ ပြည်တွင်းလေယာဉ်ပျံ)
ဒါပေမယ့်ဒီလို ဂရုစိုက်မှုမျိုးတွေဟာလည်း အမျိုးသားတွေ နှစ်သက်စေတဲ့ စွမ်းရည်တစ်ခုပါပဲ။
ဂရုစိုက်ခံရတာကို မကြိုက်တဲ့ မပျော်ရွှင်တဲ့ သူဆိုတာတော့ မရှိလောက်ပါဘူးနော်။ ဒါပေမယ့် ဂရုစိုက်လွန်တာမျိုးတော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့။
သူ ရှက်နေတာလား၊ တကယ်ဂရုစိုက်မခံချင်တာလား သေချာ ဝေခွဲပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ကြပါနော်။
အမျိုးသားတွေက စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ဖွင့်ပြောတာနည်းကြတယ်လို့ထင်မိပေမယ့် သူတို့ရဲ့ စကားတွေကို သေချာနားထောင်ပေးတဲ့ သူတွေရှိရင်တော့ ရင်ဖွင့်ပြောတတ်ကြတယ်။
စကားနည်းတဲ့ အမျိုးသားတွေတောင်မှ စကားပြောလွယ်စေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖန်တီးပေးလိုက်ရင် တော်တော်လေး စကားပြောထွက်လာတယ်တဲ့။
(၂၄ နှစ်၊ နိုင်ငံခြားလေကြောင်းလိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်နေသောသူ)
စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာ အတိုင်အပင်ညီဖို့လည်းလိုပါတယ်။ သင့်အကြောင်းတွေပဲ ပြောနေလျှင်တော့ အခြားသူကစကားမပြောနိုင်ပါဘူး။
အဲလိုပဲ သင်က ဘာမှစကားမပြောဘဲ သူပြောတာပဲ စောင့်နေရင်လည်း စကားစမြည်စတင်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးစကားပြောဆိုမှုကိုကောင်းစွာ ဦး ဆောင်ပြီးအခြားသူပြောနိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးပါ။
ဘာမှမပြောတတ်သူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းသည်လည်း အလွန်အဖိုးတန်ပါတယ်။
သေချာပေါက် တစ်ယောက်တည်းနားထောင်ခြင်းကလည်း သင့်ကိုစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေမှာသေချာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အခြားသူနဲ့ မျှမျှတတ ပြောဆိုတတ်ဖို့က အ‌ရေးကြီးပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်ကိုပဲ ညစ်ညမ်းတဲ့ စကားတွေကို ပြောနေမိသူလား ?
ဒါဆိုရင်တော့ မိန်းကလေးဆန်တဲ့အရာတွေကို ပျက်ဆီးစေတယ်လို့ ခံစားမိစေတယ်။
(၂၅ နှစ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေယာဉ်ခရီးစဉ်တွင်အလုပ်လုပ်သူ)
တစ်ခါတစ်ရံ စနောက်တဲ့အနေနဲ့ မကောင်းတဲ့ စကားလုံးတွေကို သုံးမိတာတွေရှိကောင်းရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ညစ်ညမ်းတဲ့ စကားတွေကို ပုံမှန်အနေနဲ့ သုံးနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက်တော့ မိန်းကလေးဆန်တဲ့ အပြုအမူကို ခံစားရခက်စေပါတယ်တဲ့။
ပြီးတော့ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ပုံစံကို ခံစားစေရပြီး ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့သူလို့ မြင်ရစေတဲ့ ပြဿနာလည်း ရှိပါတယ်။
အထက်လူကြီးများကို ယဉ်ကျေးစွာဆက်ဆံတတ်ဖို့က မဖြစ်မနေဖြစ်ပြီး လိုအပ်လျှင် မိတ်ဆွေများနှင့် ချစ်သူရည်းစားသာမက ယဉ်ကျေးစွာဆက်ဆံတတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
(၂၇ နှစ်၊ နိုင်ငံခြားလေကြောင်းလိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်နေသူ)
ဒါကတော့ ယဉ်ကျေးသောစကားလုံးကို သုံးတာနဲ့လည်းအတူတူပါပဲ။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ မကောင်းတဲ့စကားများပြောမိတာကတော့ အရေးမကြီးပါဘူး။
သို့သော် သင်က ကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောထားရှိနေရင်တော့ အိမ်ထောင်ဖက်အတွက်က စိတ်ချမ်းသာမယ်လို့ထင်ပါလား?
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ သင့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက် က ကြမ်းတမ်းတဲ့ စရိုက်ရှိရင်ကော သင့်ရဲ့ မိဘများနှင့်သင့်တော်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူးလို့ စဉ်းစားလာနိုင်ပါတယ်။
သင်ကအရမ်းယဉ်ကျေးလွန်နေရင်လည်း နေရခက်စေလို့ “ အလယ်အလတ်” လောက်ယဉ်ကျေးပေးပါ။ ဒါက တော့ အခက်ခဲဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ။ ။
ကဲ. . . ဘယ်လိုလဲ?
လူကြိုက်များတဲ့ အမျိုးသမီး ငါးဦး ဆီက လူစိတ်ဝင်စားစေတဲ့ ဒီအချက်တွေက သင့်ကိုအထောက်အကူဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလား ?
လုပ်ငန်းခွင်မှာဖြစ်ဖြစ် လူအများနှင့်ဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာ ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီအချက်လေးတွေကို သတိထားပြီး နေရအောင်နော်။